Sida loo wadaago mouse, kiiboodhka iyo trackpad inta u dhaxaysa iPadka iyo Mac | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/Sida loo wadaago mouse, kiiboodhka iyo trackpad inta u dhaxaysa iPadka iyo Mac
Kiiboodhka Magic cusub ee Apple ee iPad Pro-ka ku dhex dhisan trackpad - wuxuu u muuqdaa mid cajiib ah. Laakiin waxay ku kacaysaa $350. Taasi aad bay qaali ugu tahay kiiboodhka Intaa waxaa dheer, waa kiiboodhka kaliya ee faa'iido yeelan doona ilaa iyo inta uu ku dhejin karo iPad Pro kaaga. Taasi waxay la macno tahay inaysan ku haboonayn kaniinigaada soo socda haddii Apple ay wax ka beddesho naqshadaynta iPad Pro.
Is barbar dhig taas USB ama kiiboodhka Bluetooth, kaas oo la socon doona kombiyuutar kasta oo la sameeyo mustaqbalka la saadaalin karo. Hadda waxaan arki doonaa sida loo wadaago kiiboodhka Mac kaaga iyo mouse-ka ama trackpad kaaga iPad kaaga. Waxaan sidoo kale baran doonaa sida isla markiiba loogu beddelo labada, labadaba USB iyo Bluetooth.
Maya, ma aha mid la qaadi karo sida kiis cusub oo Magic Keyboard-ka ah, laakiin way ka dhib yar tahay miiskaaga. Oo waxay u badan tahay inaad haysato kiiboodhka ka wanaagsan, iyo trackpad ka wanaagsan.
$350 waxay soo iibsataa kiiboodhka Bluetooth-ka oo runtii aad u wanaagsan
Filco MiniLa Air Bluetooth, oo ay weheliso Filco Majestouch aan tenkey lahayn.
Haddii aad hore u leedahay kiiboodhka iyo mouse-ka aad ku faraxsan tahay, waad isticmaali kartaa kuwaas. Ama waxaad aadi kartaa dukaameysi. Waxaan isticmaalaa kiiboodhka Filco Majestouch (wuxuu ku kacayaa ilaa $120), iyo Apple Magic Trackpad 2 ($129). Waxaan markaa kuwan ku dari lahaa xuddunta USB-ga ee beddeleysa (wax badan oo intaas ka hooseeya). Midkaygu wuxuu dib ii dhigay ilaa $35.
Haddii aan intaas ku daro, waxaan helayaa $284. Taasina waxaa loogu talagalay, fikradayda, kiiboodhka ugu fiican iyo trackpad la heli karo. Xitaa waxaad tuuri kartaa jiirka oo weli lacag ayaa kuu soo hartay.
Fiiro gaar ah: Waad ku mahadsan tahay cusboonaysiinta iOS 13 ee dhowaan, waxaad isticmaali kartaa kiiboodhka iPad-ka, xitaa kiiboodhka PC, sababtoo ah goobaha iOS hadda waxay kuu oggolaanayaan inaad beddesho furayaasha ⌘ iyo ⌥ si aad uga dhigto inay u shaqeeyaan sida ay ugu shaqeeyaan Mac.
Wax kasta oo aan rabnay in Kiiboodhka Smart uu noqdo.
Hal qodob oo muhiim ah in la xuso: Waxaad runtii dooneysaa Apple Magic Trackpad 2 haddii aad qorsheyneyso inaad ku isticmaasho iPad-ka. Taasi waa sababta oo ah waa aaladda kaliya (marka laga reebo kiis cusub oo Magic Keyboard-ka ah iyo kiis cusub ee Logitech Combo Touch) kaas oo la shaqeeya dhammaan dhaqdhaqaaqyada multitouch trackpad ee laga heli karo iPadOS 13.4.
Qaar ka mid ah jiirarka Bluetooth-ka iyo kiiboodhka ayaa la socda furaha kuu ogolaanaya inaad ku xidhid qalabyo kala duwan. Dhowr kiiboorro oo Logitech ah iyo jiirar ayaa wata saddex badhan oo si degdeg ah ugu xidhi kara aaladaha kala duwan. Waan jeclahay habkan, laakiin beddelashadu waa gaabis - waana inaad u beddeshaa qalab kasta si gaar ah markaad ka dhex booddo Mac iyo iPad-kaaga.
Haddii aad raacdo mid ka mid ah aaladaha noocaan ah, waad dhammaatay. Kaliya raac tilmaamaha la socda agagaarkaaga cusub.
Kiiboodhka USB iyo furaha raadraaca ee iPad iyo Mac
Qalabkan Ugreen-ga ah si fiican ayuu u shaqeeyaa, laakiin beddele kasta oo duug ah ayaa samayn doona khiyaamada.
Waxaan doorbidayaa door ka duwan. Waxaan haystaa kiiboodhkayga iyo Magic Trackpad 2 oo ku xidhan halka sare lagu sheegay ee USB 2.0. Xuddunta waxa ay hal dhinac ku xidhaa afar dekedood oo USB A ah, kuwaas oo aad ku xidhi karto kumbuyuutarka, mouse iyo trackpad. Dhinaca kale waxaa jira laba dekedood oo USB A ah oo dheeri ah, waxaadna ku isticmaashaa kuwan fiilooyinka USB A-to-A ee la keenay si aad ugu xirto Mac-gaaga iyo iPad-kaaga. Waxaan haystaa xuddunta oo lagu gooyay istaagga iMac, iyadoo fiilada labaad ay ku socoto USB-C dock aan u isticmaalo iPad-ka.
Habayntan, waxaan iPad-kayga ku xidhayaa USB-C-da, sida caadiga ah, iyo mar kasta oo aan rabo inaan isticmaalo kiiboodhka iyo trackpad-ka, kaliya waxaan gaaraa gadaashiisa Mac oo taabo badhanka. Trackpad-ka iyo kiiboodhka ayaa isla markaaba laga heli karaa iPadka. Waa sixir oo kale. Iyo sababta oo ah waxaan ku isticmaalayaa iyada oo loo marayo xarun awood leh, iPad-ka sidoo kale wuu sii dallaci doonaa, wuxuuna ku xiran yahay interface-ka maqalka, kuwa ku hadla, iwm. Oo waxa ugu fiican waa, kaliya wuu shaqeeyaa.
Waxa jira meelo badan oo USB-ga ah oo la heli karo. Anigu kama heli karo kayga goobta Amazon Amazon, laakiin raadi furayaasha KVM waxaadna heli doontaa wax. Xitaa waxaa jira furayaasha KVM-ga oo wadaagi kara kormeeraha kombiyuutarada, laakiin ma haysto fikrad sida ugu wanaagsan ee ay taasi ugu shaqeyn karto iPad-ka.
Ku raaxayso ku xidhida kiiboodhkaga Mac iyo iPadka
Tani waa habaynta niche, laakiin waa niche weyn. Haddii aad u baahan tahay inaad iPad-kaaga u beddesho laptop leh trackpad, markaa doorashada Apple ayaa weli ah mid wanaagsan. Laakiin haddii kiiskaaga isticmaalka uu ku fadhiyo miiska, markaa tani waa doorasho aad u fiican. Waxaad helaysaa kiiboodhka ka wanaagsan, iyo trackpad ka wayn. Waxa kale oo aad uga jaban iibsashada Keyboard-ka Magic-ga cusub, sababtoo ah waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad iibsatid furaha - hubaal Mac-gaagu wuxuu horey u haystay kiiboodhka iyo mouse/pad aad jeceshahay, markaa isticmaal kaliya.
Boostadani waxay ka kooban tahay xiriiriyeyaal xiriir la leh. Cult of Mac waxaa laga yaabaa in aad hesho komishan marka aad isticmaasho xidhidhkayada si aad u iibsatid.
Sida SEO-yadu ugu soo wajahan yihiin taraafikada iyo carqaladaynta miisaaniyada [Video]